Nhọrọ Ndị Papa Na-eji Yam Ntụ ọka 1.5Kg | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Papa's Choice Ji ntụ ọka 1.5Kg - Ordrs
Nhọrọ Papa ga-eji ntụ ọka 1.5Kg
Yam ntụ ọka bụ ntụ ntụ eji eme nri n'ọtụtụ ebe. A na - ejikarị ọcha eme ntụ ọka ahụ na nri ndị Africa, dịka Amala. Enwere ike iji ya n'ọtụtụ usoro nri ndị ọzọ ma achọrọ ya. A na-akwadebe ya site na igweri yams kpọrọ nkụ ruo mgbe ha ruru ntụ ntụ. Enwekwara ike iji ntụ ọka dị na mmiri si na mmiri mee mmiri site na ihicha anyanwụ.